FamilyCharger waa hal xeedho oo keliya shan qalab oo isku mar ah | Wararka IPhone
Waan jecel nahay baytariyada, dhab ahaantii baytariyadu waxay u egyihiin wax uun qarnigii la soo dhaafay. Si kastaba ha noqotee, waxaas oo dhami waxay keenaan dhibaato yar, gaar ahaan marka rarka. Waxba kuma lihin xafiisyadayada iyo miisaska sariirta ee aalado aad u tiro badan oo u baahan qiyaasta maalinlaha ah ee elektaroonikada
Qalabka Shaybaarka ayaa lahaa fikrad aad u fiican oo bilaabay inuu suuqgeeyo xeedho awood leh oo leh fiilo awood u leh inay ku soo rogto lix qalab isla waqti isku mid ah, maleeysaa? Aynu eegno badeecadan cusub ee xiisaha leh ee naga saari doonta wax ka badan hal dhibaato si fudud.
Waxa igu adag in aan fahmo ayaa ah sida uusan qof horey ugu dhicin, waxaa jira waxyaabo la mid ah oo suuqa yaala in muddo ah, laakiin ma ahan sida wax ku ool ah, awood badan oo isku dhafan sida tan, xaqiiqaduna waxay tahay in qiimuhu uusan joogin dhammaantood aan macquul ahayn iyada oo la tixgelinayo awooddooda. Sidee bay noqon kartaa haddii kale, Sare Shaybaarka ayaa go'aansaday in magaca sheyga uu yahay FamlyCharger, nidaam culeysyo fara badan oo aan diiradda saarin hal nooc oo isku xirnaanta laakiin waa wax badan oo laga mahadcelin karo fiilada badan oo iyana dhankeeda leh dhowr nidaam oo kala duwan.
Fiilooyinkaas waxaa lagu soo ururiyey hal xarig, mid kasta oo ka mid ah fiilooyinka ayaa awood u leh inay helaan 2.4A shaqsi ahaan, in ka badan inta ku filan culeyska caadiga ah. Tani waxay u isticmaashaa koronto ilaa 65W, hal fiilo USB-C ah, hal fiilo microUSB ah, iyo saddex fiilooyin danab, Go'aan ahaan inta ugu badan ee ay ka faa'iideysteen arrintani waa kuwa si sax ah u isticmaala macruufka. Waxay leedahay qalab kale sida silikoon "fiilooyinka fiilooyinka" si aan miiska u saarnno. Waxa ugu fiican waa qiimaha, $ 50 haddii aan doorano kaliya fiilada badan ee leh isku xirka USB-A, ama $ 75 haddii aan doorano inaan ku darno korontada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » FamilyCharger waa hal xeedho oo keliya shan qalab oo isku mar ah
Waxay naftayda ku dhaawaceysaa in cinwaanka maqaalku uusan ahayn "hal xeedho oo dhan lagu wada xareeyo"
Ku jawaab Mali
Astaamo ganacsi oo ay diiwaangashan tahay Apple ayaa soo jeedinaya in kaarka Apple uu dhawaan ku sii jiri doono dalal badan
Soodeji beta-ga saddexaad ee dadweynaha ee iOS 13 iyo iPadOS hadda